ခ်က္ျပဳတ္နည္း – Focus Myanmar
Home > ခ်က္ျပဳတ္နည္း
မနက်စာ၊ အစာပြေ လုပ်စားနိုင်ဖို့ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်းပါ။ လုပ်ရလွယ်ပြီ အိမ်မှာ အလွယ်တကူ လုပ်စားနိုင်တာမို့ ခုပဲ တူတူချက်ကြည့်ရအောင်…
Categories ခ်က္ျပဳတ္နည္း	Comments: 0
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ဝက်နားရွက်၊ ဝက်လျှာ၊ အူပိတ်၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ အသဲ၊ အသား၊ အခေါက် စသဖြင့် ကိုယ်စားချင်တာ အကုန်ထည့်ပါ။ ၁ကီလိုခွဲခန့် ယူပါ ပြုတ်ထားသော ကြက်ဥ ၄လုံးရှာလကာရည်၊ ဟင်းချက်ဝိုင်၊ ခရုဆီ၊ ပျ
ကျမကတော့ ဝက်သား သို့ ကြက်သားနဲ့ကြော်ရတာနှစ်သက်တယ်စိမ့်စိမ့်လေးမို့ အရမ်းကြိုက်တယ်ကဲ!!!!ရှမ်းမုံညင်းချဉ်ကြိုက်သူများ မိမိအိမ်မှာသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်စွာ လုပ်စားလို့ရပြီနော်။
ငါးဖယ်ကိုဆား ဆနွင်း အရသာမှုန့်လေးနဲ့ထောင်းပြီး အလုံးသေးလေးတွေလုံးထား
ကျမကတော့ ဝက်သား သို့ ကြက်သားနဲ့ကြော်ရတာနှစ်သက်တယ်စိမ့်စိမ့်လေးမို့ အရမ်းကြိုက်တယ်ကဲ!!!!ရှမ်းမုံညင်းချဉ်ကြိုက်သူများ မိမိအိမ်မှာသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်စွာ လုပ်စားလို့ရပြီနော်။Homemade မုံညင်းချဉ်
အုန္းထမင္းကို ၾကက္သား (သို ့) ၾကက္အသည္းအျမစ္ဟင္း၊ ပုဇြန္ေျခာက္ဘာလေခ်ာင္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ သံပုရာသီး အခ်ဥ္ေလးရယ္ ဒါမွမဟုတ္ သရက္ခ်ဥ္သုပ္ေလးရယ္၊ နွစ္သက္ရာ ဟင္းခ်ိဳ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တြဲဖက္စားလို ့ရပါတယ္။
K drama လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေကြည့်ရင် ကင်မ်ချီရယ်၊ ဆိုဂျူးရယ်၊ ပဲခေါက်ဆွဲရယ်ကိုတော့ မဖြစ်မနေ တွေ့ရမှာပါ။ တကယ်တော့ ပဲခေါက်ဆွဲဆိုတာ ကိုရီးယား အစားအစာတွေထဲမှာ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး အစားအစာတစ်မျိုးပါပဲ။ အာဟာရတန်ဖိုးလည်း ပြည့်ဝတဲ့ ကိုရီးယားပဲခေါက်ဆွဲကို အိမ်မှာလုပ်စားချင်ရင်တော့ အောက်မှာပြုလုပ်နည်းလေးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်။
ဝက်အူချောင်း (သို့) ကြက်အူချောင်းလုပ်နည်း
ဝက်အူချောင်းလုပ်နည်းက ဆိတ်အူနဲ့မလုပ်ပဲ ပလပ်စတစနဲ့ပတ်တဲ့နည်းပါ။ တကယ်လို့ဆိတ်အူနဲ့လုပ်ချင်လဲရပါတယ်။ ဝက်အူချောင်းကို နီနီလေးဖြစ်ချင်ရင်တော့ ယမ်းစိမ်းထည့်ရင်ထည့် မထည့်ရင်လဲ အနီရောင်ဆိုးဆေးထည့်ရင်တော့နီပါတယ်။ အိစံကတော့ ဘာမှမထည့်ထားလို့သိပ်မနီပါဘူး။ အိမ်မှာပဲလွယ်ကူအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းကိုရွေးပြီး စမ်းကြည့်တာ အောင်မြင်သွားလို့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝက်အူချောင်းကို ယမ်းစိမ်းတွေ လဲမပါပဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့လုပ်စားရအောင်နော်။
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကြက်သား ၊ မှိုခြောက် ၊ ပန်း ခြောက် ၊Sausage(ကြိုက်လို့တမင်ထည့်တာပါ၊ သာမန်အားဖြင့်မထည့်စားတတ်ကြပါဘူး )
ငါးဖယ်ချဉ် (ခ) ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နည်း
အိသက် သားအကြီးက ပုဇွန်ချဉ်အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန်ပုဇွန်ချဉ် လန်ဒန်အိမ်မှာလုပ်စားဖြစ်တယ်။ ဒါကို လန်ဒန် လာလည်သွားတဲ့ သူ့အဖွား ဒေါ်သဲသဲလှုပ်များက ပုဇွန်ချဉ် ပါပို့တဲ့ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။ ကိုထက်မေမေက ဝါးခယ်မကပါ။ ပုဇွန်ချဉ် နံမည်ကြီးသောဒေသပေါ့။ ကိုထက်မေမေက ဝါးခယ်မကပုဇွန်ချဉ်ဒိုင်ကိုရှယ်အောဒါမှာ ချဉ်ပြီးပြီးချင်း ရန်ကုန်ကိုပို့ခိုင်းပါတယ်။ ကျမတို့ ဓနုဖြူဆိုင်( လှည်းတန်း- အင်းစိန်) ဆိုင်မှာလဲအဲဒီပုဇွန်ချဉ်ပဲသုံးတာပါ( ဒါကကြောငြာ) တနင်္လာမနက်စောစော ကားဂိတ်ကသွားယူ ကျမမေမေက ကျန်သူပို့ချင်သေ